Loko amin’ny tarehimarika an-tserasera – Site lehibe amin’ny alàlan’ny isa, fidirana amin’ny loko miloko sy scanner miloko
Ry zalahy, tia manaitra ny sary sy ny fandokoana sary ve ianao? Noho izany, aleo manatsara kokoa ny fampahalalana ny loko anao. Araka ny fantatrao, misy tranonkala sy fampiharana maro izay ahafahanao manatsara ny hoso-doko hoso-doko ary hanao ny valin’ny sary hosodoko. Tsy lazaina intsony fa afaka miditra ny loko amin’ny alàlan’ny isa Online, loko vita pirinty amin’ny isa na mampiasa ny Inverter miloko.
Avy eo, mba hanampiana anao hivoaka amin’ny fisafotofotoana sy ny ahiahy, ity pejy ity dia hampiseho aminao ny fomba hiatrehana ny loko amin’ny alàlan’ny Internet Online. Eny tokoa, hanome anao ireo ohatra tsotra momba ny sarinao miloko ianao miaraka amin’ny safidy isan-karazany toa ny Colleur Teal ary ny loko Pastel. Noho izany, antoka tsara fa mijanona eto amin’ity pejy ity ianao ary mankafy ny famakiana!
Inona no loko amin’ny isa?
Na izany aza, ho an’ireo vao manomboka, dia ho tsara raha mahazatra amin’ny loko amin’ny alàlan’ny isa ihany ianao. Ary eny, ny Color by Number no endri-javatra manokana izay misy amin’ny lalao na amin’ny sehatra fianarana sary hosodoko hafa. Eny, manome io toerana io handokoana na hosodoko ity endri-javatra ity avy eo, safidio ny sary miloko mety. Fantatrao ve? Betsaka ny Safidy sary azo ampiasaina azonao ampiasaina.
Raha ny mahitsy dia mila manao sary lakile toa ny Sketch biby ianao. Avy eo, hanomezana endrika an’i Color Online ny loko amin’ny alàlan’ny Number Online izay azonao ampiharana azy. Ohatra, azonao atao ny mampiasa hoditra miloko Hex hahatonga azy ho voajanahary. Na, ho an’ny volavola sary miloko marevaka, azonao atao koa ny miloko Teal na loko pastel.
Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin’ny loko araka ny isa?
Ny sasany aminareo dia mety ampiasaina hampandehanana ny fomba hosodoko mahazatra izay ilainao ny palety, ny kanvas ary ny fitaovana rehetra amin’ny sary hosodoko. Saingy, amin’izao fotoana izao dia ho tsara raha manandrana manatsara ny fahaizanao hosodoko ianao amin’ny alàlan’ny Fandehanana amin’ny Online Online. Na izany aza, misy tombony azonao raisina avy amin’ny Color by Number Online ary ireto dia:
• Amin’ny voalohany, manamaivana anao ny mianatra teknika sary sy sary hosodoko.
• Avy eo, dia manome sary miloko marobe izay azonao ampiharina amin’ny sary hosodoko.
• Ny loko amin’ny alàlan’ny Internet Online dia azo idirana mandritra ny 24 ora izay ahafahanao miditra aminy na aiza na aiza misy anao.
• Ho an’ireo nanombohana dia manampy anao hianatra sy hanao fampiharana ny sary hosodoko sy sary amin’ny alàlan’ny fomba tsotra sy mahaliana ny loko miloko.
• Farany, ity endri-javatra ity dia manampy anao hanana fahaiza-mamorona kokoa amin’ny alàlan’ny famoronana endrika ataonao Home Painting, sary hosodoko ary maro hafa.
Inona avy ireo karazana loko amin’ny isa?
Na eo aza izany dia misy karazana loko roa misy isa izay azonao ampiasaina. Na dia samy manana ny tombony manokana sy ny endri-javatra sy ny fitaovany manokana aza ny tsirairay amin’izy ireo. Fa raha ny marina, dia samy manampy anao hanatsara ny sary hosodoko sy ny fandokoana azy ireo. Avy eo, ireto izy ireo:
• loko miloko azo atao pirinty amin’ny isa
Voalohany indrindra dia ny loko pirinty amin’ny alàlan’ny Nomery dia mila ny takelaka sy fitaovana fandokoana. Mba hampidiranao azy dia afaka misintona ny loko amin’ny alàlan’ny Number Online Template avy amin’ireo tranokala isan-karazany. Avy eo, afaka manonta azy ianao ary manome ny sary miloko amin’ny alàlan’ny fitaovana maroloko samihafa. Tsy marihina fa afaka mampiasa krayon, loko pensilihazo, marika loko na mpanao sary ianao.
• Loko amin’ny tarehimarika an-tserasera
Faharoa, azonao atao ny mampiasa Color by Number Online izay hita ao amin’ny lalao na tranonkala fianarana hoso-doko hafa. Tahaka ny efa nolazainay teo aloha dia afaka miditra amin’ny tranokala ianao ary manao sary ny sary hosodoko. Rehefa vita, dia afaka misintona sary miloko ianao toy ny hoditra miloko Hex ary mampihatra eo amin’ny sary. Aza matahotra! Ny loko amin’ny alàlan’ny Online Online dia ahafahanao mitahiry ny asanao teo aloha amin’ny Internet ary hanontana azy.
Ahoana ny fomba hidirana loko araka ny isa ho an’ny sary hosodoko?
Ankehitriny, fotoana izao hidirana ny loko amin’ny alàlan’ny Number Online. Fantatray fa ny sasany aminareo dia manomboka fotsiny ity dingana ity. Avy eo, mila toro-lalana hiatrehana azy ianao. Miaraka amin’ny prologue tsy dia be loatra eto, ity dingana ity hidirana amin’ny Color by Number Online:
• Dingana 1 # Ampidiro ny sary
Voalohany indrindra azonao atao ny misintona ny sary avy amin’ireo loharano isan-karazany. Na, azo atao aza ny manome fotsiny ny sary manjo an’ireo sary ireo. Azonao atao ny mampakatra na mampifamadika ny sary eo amin’ny Loko amin’ny alàlan’ny atiny amin’ny Internet Online.
• Dingana 2 # Omeo ny famaritana
Voalohany indrindra, mila manome ny filazalazana ny sary izay nampakaranao vao haingana ianao. Amin’ity tranga ity, azonao atao ny mampiasa teny dimy na mihoatra fanampiny ary mamaritra ny lafiny rehetra ao anatin’ny sarinao.
• Dingana 3 # Safidio ny loko
Ho an’ny manaraka dia afaka miloko ny isa miorina amin’ny safidy eo amin’ny loko miloko ianao. Mazava ho azy, mila ny famoronana ataonao mba hahatonga ny sary tsara tarehy kokoa. Raha ny fampahalalana anao dia misy karazana Safidy hex Online izay haneho ny sarinao.
• Dingana 4 # Hitetika ny bokotra Araho
Vantany vao nahavita ny loko ianao amin’ny Number Worksheet, dia afaka mikitika ny bokotra fametrahana ianao ary miandry fotoana hahazoana ny valiny. Mety mila dimy na folo minitra aza izy ireo hanatontosana ny valin’ny loko loko.
• Dingana 5 # Zahao ny valiny
Farany, azonao atao ny manamarina ny valiny. Ao amin’ity fizarana ity dia malalaka ho anao raha manavotra ny asanao an-tserasera na mandefa izany aza. Amin’izao fotoana izao, ny kisarisary sary hosodoko taloha dia miharihary kokoa noho ny antsipirian’ny hoditra loko Hex, ny loko Pastel ary ny loko Teal.
Inona no fampiharana ampiasaina amin’ny fandokoana an-tserasera?
Raha ny fampahalalana anao dia misy fampiharana tsotra roa azonao ampiasaina hampidirana loko amin’ny alàlan’ny Number Online. Izy ireo dia samy hanampy anao hamantatra ny sary miloko tsara sy mety indrindra ho an’ny skelinao. Ary, eto ny fampiharana dia:
• Inverter miloko
Tamin’ny voalohany, azonao atao ny mampiasa Color Inverter mba hamenoana ny loko amin’ny lamosinao. Amin’ny alàlan’ity fampiharana ity, afaka manomboka miloko amin’ny isa ianao amin’ny alàlan’ny sary an-tserasera misy amin’ny loko Hex sy safidy RGB miloko hafa azo alaina. Mazava ho azy, azonao atao ny mahazo fanangonana loko pastel, hoditra loko Hex ary maro hafa.
• Scanner miloko
Mandritra izany fotoana izany, azonao atao ihany koa ny mampiasa Color Scanner hamantarana ireo fanangonana loko amin’ny sary izay nakarinao vao haingana. Amin’ity tranga ity, ny Color by Online Scanner dia haneho aminao ny valiny ary hanome toerana hanovana izany azy.
Ahoana ny fomba hidirana loko miloko forverter?
Misy dingana vitsivitsy hidirana amin’ny loko Inverter ary indreto:
• Login amin’ny Color Inverter App amin’ny PC
• Ampidiro na ampidiro ny sary lakolosy
• Safidio amin’ny sisiny sary ny loko
• Tsindrio ny bokotra fandefasana
• Raiso ny vokatra
Ahoana no hidiran’ny Scanner miloko loko hoso-doko?
Ary izao, eto no dingana miditra amin’ny Scanner Color sy hahazoana famaritana bebe kokoa ny sarinao dia ireto:
• Login na misoratra anarana amin’ny Color Scanner App amin’ny PCo
• Tsindrio eo amin’ny scanam
Ka ry bandy! Izy io no fampahalalana ankapobeny momba ny loko amin’ny Internet Online. Ankehitriny, azonao atao ny mampihatra ny mandoko ny sarinao amin’ny alàlan’ny fampiasana ny loko Inverter na ny fidirana amin’ny Scanner Color mba hahazoana famaritana bebe kokoa. Aza adino ny mampihatra ny Hex Online Hex mety aminy ary ataovy tsara kokoa ny sarinao. Tohizo ny fizahana ary hijanona mamorona!